နှာဗူးတို့ ဆင်ခြေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှာဗူးတို့ ဆင်ခြေ…
Posted by Kaung Kin Pyar on Feb 21, 2017 in Creative Writing, Short Story | 20 comments
ဒီကိစ္စလဲ ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ…
ကိုယ်တိုင်က အတိုဝတ်နေလို့ ချဲလန့်ဂ်ျချင်တာတော့ မဟုတ်…၊ မ၀တ်တာကလဲ သိပ်လိမ္မာယဉ်ကျေး မြန်မာမှုချစ်မြတ်နိုးလှလို့ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးရယ်…။ ကိုယ့်ခြေထောက်မလှတာ ကိုယ်သိနေလို့ ၀တ်ချင်သော်လဲ အောင့်နေတာမျိုး…
ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဒီကိစ္စကို မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေတာ ကြာပြီ…
Website တစ်ခုမယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတာဖတ်ရင်း… ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့လဲ တိုက်ဆိုင်တာမို့…ရင်လာဖွင့်တာပါ…
သူ့ပိုစ့်ကိုဖတ်ရင်း ဖဘက ပုံတစ်ခုကိုမြင်ယောင်ပြီး ပြုံးမိသေးတယ်…။
မျက်လုံးသာဖော်ပြီး (ဒူကာခေါ်မလား..မပြုံးတော့ ပိုသိလိမ့်မယ်) ခြုံထားတဲ့ ကုလားမကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ အဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ အနောက်အလယ်ပိုင်းကို စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ ယောကျာင်္း၃ယောက်ပုံရယ်… ပေါင်ရင်းလောက်အတို စကဒ်နဲ့ လည်ဟိုက်အင်္ကျီဝတ်ထားပေမယ့်လဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားနေကြတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက ပုံတစ်ခုရယ်.. ယှဉ်ပြထားတာ..
ခုမှ ဒီမှာကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးလာလေတော့ မိန်းခလေးငယ်တွေလဲ သူတို့အလှကို ဖော်ပြချင်ကြတယ်…။
ဒါပေမယ့်လဲ ဒါတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲလဲ ဗူးတဲ့သူက ဗူးကို ဗူးတာပါ…
ဒီလိုဆို သူတို့ ပြောကြလိမ့်မယ်…၊ ယောကျာင်္းတွေက နှာဗူးမဟုတ်ရင် ဂန်ဒူးသာရှိပါသတဲ့…။ ဂန်ဒူးတော့ အဖြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းဘယ်သူထွင်သွားမှန်းမသိတဲ့ စကားစုနဲ့ ကိုင်ကြတော့မယ်…။
နှာဗူးမဟုတ်သလို ဂန်ဒူးလဲမဟုတ်တဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့် ယောကျာင်္းသားတွေရော.. ဒီကမ္ဘာလောကမှာ မရှိနိုင်တော့ဘူးလားရှင်…
လုံလုံခြုံခြုံပဲဝတ်ဝတ်… ဒူကာပဲခြုံခြုံ အဆင့်အတန်းနိမ့်ပြီး မိန်းမတွေကို သူတို့မျက်စိအရသာခံစရာလို သဘောထားနေတဲ့ အမျိုးသားတွေရှိနေသမျှတော့ ဘာဝတ်ဝတ်မထူးဘူးရယ်..
ဖစ်ဖတိ ဖစ်ဖတိပေါ့…။ လွတ်အောင်ပြောချင်ရင် အရင်က မမြင်ဖူးတာတွေမြင်..၊ မကြည့်အပ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေ ဖောဖောသီသီဖြစ်နေတော့လဲ… ဒီလို အတိုအပြတ်တွေဝတ်မိတဲ့ မိန်းခလေးတွေဟာ ကြွေလုလုထန်းသီးပေါ် တက်နင်းမိတဲ့ ကျီးမိုက်တွေ ဖြစ်သွားတော့တာပဲ…။
ဒါပေမယ့်လဲ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ပြောထားသလို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ထားလဲ ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးတာမို့ သူပြောသမျှ ထောက်ခံနေမိတာပဲ….
တချို့စကားလုံးတွေက နည်းနည်းပွင့်လင်းမြင်သာသလိုရှိပေမယ့်.. ဖြတ်ညှပ်ကပ်မလုပ်ဘဲ သူရေးထားတဲ့အတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…။
မုဒိန်းမှုလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ပို့စ်အောက်တိုင်းမှာ အမြဲမြင်ရတတ်တဲ့ စာသားအချို့ရှိတယ်။
သူကိုက အနေထိုင်မတတ်လို့ နေမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ ပေါ့……ပေါ့’ ဆိုတဲ့ နှမချင်းမစာနာ၊ လူသားချင်းမစာနာ၊ အမဆိုတာနဲ့ အပြစ်ပြောချင်တဲ့သူတွေရဲ့ စကားလုံးကြီးတွေကို မမြင်ချင်မှ အဆုံး မြင်ရတတ်တယ်။
အံ့သြစရာက အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေထဲမှာ ယောက်ျားလေးတွေအပြင် မိန်းကလေးအချင်းချင်း ပါပါနေတာကိုပဲ။
ဟုတ်ပြီ။ မိန်းကလေးက အတိုဝတ်ထားလို့ မုဒိန်းမှုဖြစ်တာထားပါတော့။
ထဘီတွေ၊ ရင်ဖုံးတွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် လုံလုံတွေ ဝတ်ထားရင်းနဲ့တောင် ဘာကြောင့်များ
မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ အမှုတွေ ရှိနေရသေးတာလဲ ???
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေ အသားယူခံရတယ်။ တဏှာမျက်လုံးတွေနဲ့ စားတော့မတတ်၊
ဝါးတော့မတတ် အကြည့်ခံရတယ်။ အတိုဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ အဲ့လိုခံရတာလား။
နိုး….. မဟုတ်ပါ။ မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေပါ အဲ့လိုအသားယူတာတွေ ခံရတာပါ။
ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေက မဖော်သင့်တာတွေဖော်လို့ မနေနိုင်လို့ ကြည့်ရပါတယ်ဆိုသူတွေ
ဖြေကြည့်ကြပါ။ လုံလုံခြုံခြုံကောင်မလေးတွေကိုကော ရှင်တို့ မပြစ်မှားကြဘူးတဲ့လား။
ရှင်တို့ ပြောကြတယ်၊ လူကြီးတွေကက ပြောကြတယ်။ ‘အဲ့လို အကြည့်မခံချင် လုံလုံခြုံခြုံဝတ်’ တဲ့။
ဟုတ်ပြီ။ အဲ့စကားကို ကျွန်မ အမေလည်း ကျွန်မကို အမြဲပြောတယ်။ ကျွန်မ အဝတ်အစားရွေးတိုင်း
“ ဟဲ့ အဲ့ဒါတိုတယ် မဝတ်နဲ့၊ အဲ့ဒါဟိုက်တယ် မဝတ်နဲ့၊ အဲ့ဒါ လက်အရမ်းပြတ်တယ် မဝတ်စမ်းနဲ့၊
နင်ကားပေါ်မှာ အကြည့်ခံချင်လို့လား၊ အနှိုက်ခံချင်လို့လား’’ ပေါ့လေ။
နားညည်းမခံချင်တဲ့ ကျွန်မ များသောအားဖြင့် အမေ့စိတ်တိုင်းကျ မြန်မာဝတ်စုံပဲ ရွေးဝတ်ဖြစ်တယ်။
အိမ်ကနေ ကားဂိတ်ကို လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းမှာ ယောကျားအချို့ရဲ့ မျက်လုံးအစုံတွေက
ကျွန်မရဲ့ တင်ပါး၊ ရင်အစုံက မခွာဘူး။ အဟက် ကျွန်မ တစ်ချက် ခနဲ့မိတယ်။
ကားပေါ်ရောက်တော့ ကားကျပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထိကပါး၊ ရိကပါး လာလုပ်တယ်။
ဘယ်ရမလဲ ဒေါက်နဲ့ မာန်ပါပါ တက်နင်းပေးလိုက်တာ ငနဲသား ‘အား’ ခနဲ နေသွားတာ။
ဟင်းဟင်း…. ဒါ ကျွန်မ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ထားရင်းနဲ့တောင် အဲ့လို လာလုပ်တာနော်။
ကားဂိတ်ကနေ ရုံးကို လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းမှာ ကားပေါ်က လူအချို့
ကျွန်မကို ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ သားပြောမယားပြော မထိတထိ ပြောပြီါ် ပါးစပ်အရသာခံသွားကြတယ်။
အိုးလေးလှုပ်ပါဦးဆိုတဲ့ သီချင်းတောင် ဆိုသွားလိုက်ကြသေး။
ကျွန်မလေ အဲ့ငနာတွေကို ခဲနဲ့ကို ထုပစ်ချင်တာ။ မနည်း ထိန်းထားလိုက်ရတယ်။
ကျွန်မလေ ရှင်တို့ ပြောပြောနေတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကို ဝတ်ထားတာပါ။
ရှင်တို့ အပြစ်ဖို့နေကျ အတိုအပြတ်တစ်ခုမှမပါဘူး။
အဲ့အကြောင်း အိမ်မှာ အမေ့ကို ပြန်ပြောတော့ ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။
နင့်မျက်နှာပေးက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမှ မသိဘဲ တဲ့။
ကျွန်မ တော်တော် အံ့သြသွားမိတယ်။ အမေလိုလူမျိုးကတောင် သူစိမ်းယောက်ျားတွေထက်
သမီးမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို အရင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း
ရှင်တို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ ကျွန်မတို့ပဲ မှားတာပါ။
ရှင်တို့ပဲ ပြောကြပါ။ အတို ဝတ်တဲ့ ကျွန်မတို့ပဲ မှားသလား၊ ဆန့်ကျင်ဘက် မြင်တာနဲ့
တောင်တတ်တဲ့ ရှင်တို့ အချို့ ပုရိသတွေပဲ မှန်သလားဆိုတာ။
ကျေးဇူးပြုပြီး လူကို လူလို့ပဲ မြင်ကြပါ။ ယောက်ျားရယ် မိန်းမရယ်ဆိုပြီး ခွဲမမြင်ကြပါနဲ့။
ယောက်ျားတိုင်းကို မဆိုလိုပါ။ အချို့သော အချို့သော ဝင်းသော်လို
ဒါလေးဖတ်ပြီး အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်….။ ကျားပေါက်ရဲ့ ဟိုသီချင်းတောင် ပြေးသတိရမိသေး…
မှားရင်ခံ…မှန်လဲ ခံလက်စနဲ့ ခံ….ဆိုတာ
မြန်မာ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကိုက လူကိုလူလို့မမြင်သေးဘဲ Gender ခွဲနေသမျှတော့ ကျမတို့ မိန်းမတွေ အနှိမ်ခံနေရဦးမှာပဲ..…
အဲ့လိုတွေ မြင်လေကြားလေ ကြုံရလေ…. အသဲပေါက်လေ မခံနိုင်ဖြစ်မိလေပဲ..
စိတ်ဓာတ်မမြင့်မားပဲမြန်းး ပိုမြင့်မြတ်တယ် ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံဂျီးမို့ အံ့ဩတာပါကွယ်။
အာ့လိုနဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရနေကြတာ က သူတို့၊ လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပြောခံနေရတာက အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတာ။
အာ့ကြောင့် ဆရာမ ဂျူး ကို သူတို့ မုန်းတာပေါ့။
သူတို့ စိတ်ဓာတ်တွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ထုတ်ရေးနိုင်တယ်လေ။
Victim Blaming ဆိုတာလည်း ပျောက်စေလို။
ပြန်ပြင်ရမယ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဒီမှာ တပုံကြီးပဲ မမဂျီးရယ်…။ နေ့တဓူဝ မြင်နေရတော့လဲ ကြာတော့ အချဉ်ပေါက်လာတယ်…
သူတို့ကြည့်သမျှ ပြောသမျှ အာချောင်သမျှ မှားမှားမှန်မှန် ငုံ့ခံနေရရှာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို မြင်တိုင်း စိတ်မကောင်းဘူး..။
ဒါနဲ့ မမဂျီး…။ blockquote ဆိုတာလေး ပြင်ပေးပါဦးနော်…။ လုပ်ထားတာ မှားသွားတယ်..။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးလဲ အလင်းပြပါအူး ….။
မြန်မာပြည်မယ်မိန်းမတွေ အခွင့်အရေးအပြည့်မရပါဘူးပြောတော့လည်း.. ဟို အင်္ဂလိပ်က.. အင်္ဂလန်-မြန်မာအရီးလတ်က.. မဟုတ်ပါဘူးတဲ့..။
ဆိုတော့.. ဒါက.. အမျိုးသမီးထုများကိစ္စ..
ကျုပ်တို့ကတော့.. ဘာလှလှ .. လှတာကြည့်မှာပဲ..။
မလှတာလည်း ကြည့်မှာပဲ.. မျက်လုံးက ကြည့်ဖို့ထားတာ..။
ဒီကိစ္စ က ဆွေးနွေးရရင် ကိုယ့် ပေါင် ကိုယ် လှန်ထောင်း သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။း)
တိတ်တိတ်လေးပဲ စာဖတ်နေသူကြီး လုပ်ပါတော့မယ်။း)
“ဏှာဘူး(နှာဘူး)အကြောင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ အဖြာဖြာ”
၄- သူများမမြင်တာ သူတို့မြင်တယ်
၅- စူးစမ်းလေ့လာမှု အားကောင်းတယ်
၆- အလှတရားတွေကို ရှာဖွေနိုင်တယ်
၈- ယောက်ျားစစ်ကြောင်း ထင်ရှားတယ်
၁- ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာ ဆိုတဲ့ သီလကို ကျိုးပေါက်စေတယ်
၂- တစ်ဖက်သားရဲ့ဣနြေ္ဒကို ပျက်ပြားစေတယ်
၃- မိန်းကလေးတွေရဲ့ရွံကြောက်ကြီး ဖြစ်စေတယ်
၄- မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်
၅- လူမှုရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်
၆- အချိန်နဲ့ ငွေကို အလဟဿဖြစ်စေတယ်
ဏှာဘူးမှာ အဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပါတယ်။
မနောကံမြောက်ဏှာဘူးကတော့ ကမ္ဘာမှာ အပေါများဆုံးပါ။ အတော်များများ ထိန်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ သူတို့က တစ်ဖက်သားကို သိပ်တော့ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲသာ ပြစ်မှားချင်တိုင်း ပြစ်မှားနေတာပါ။ အပြင်ကိုထုတ်မပြလို့ သူတို့က အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဏှာဘူး စာရင်းဝင်ပါတယ်။
ဝစီကံမြောက်ဏှာဘူးကတော့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ စိတ်နဲ့တင် ပြစ်မှားတာ အားမရလို့ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောပြီး ပြစ်မှားကြတာပါ။ တချို့က ကိုယ့်ယောက်ျားတွေ အချင်းချင်းပြောကြပြီး ပြစ်မှားကြတာပါ။ “ဟိုစော်ကို ကြည့်စမ်းပါဦးကွာ၊ သောက်ရမ်းမိုက်တယ် ဘာ ညာ” စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ပြဿနာရှိတာက ကိုယ့်အချင်းချင်းပြောရုံတင် အားမရဘဲ ကာယကံရှင်ကိုပါသွားပြီး မထိတထိ ရိတိတိ သွားပြောကြတာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြောတဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ပြဿနာကကြီးနိုင်ပါတယ်။
ကာယကံမြောက်ဏှာဘူးကတော့ အန္တရာယ်အများဆုံး ဏှာဘူးမျိုးတွေပါ။ သူတို့ကို ကြည်ဖြူတဲ့သူကို ဏှာဘူးသွားထတာက သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်တဲ့သူတွေကို ဏှာဘူးသွားထပြီး ကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ရင်တော့ အကျိုးဆက်က မတွေးဝံ့စရာပါ။ ဒါမျိုးကိုတော့ ဏှာဘူးလို့ မခေါ်ဘဲ တဏှာရူးလို့ ခေါ်ရတော့မှာပါ။
ဏှာဘူးနဲ့ တဏှာရူး မတူကြပုံက
ဏှာဘူးဆိုတာမျိုးက ယောက်ျားအတော်များများမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သဘာဝမျိုးပါ။ မနောကံနဲ့ ဝစီကံလောက်ကိုပဲ ချိုးဖောက်ကြတဲ့ ယောက်ျားမျိုးတွေပါ။ အဲ့ဒါမျိုးက ထိန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် ထိန်းကြတဲ့သူ ရှားမယ် ထင်ပါတယ် (ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့ ?)။ သူတို့က ငမ်းရုံလောက်ပါပဲ။
တဏှာရူးဆိုတာမျိုးကတော့ ကာယကံမြောက် ချိုးဖောက်ကြတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့က ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ဆိုသလိုပါပဲ။ သူတို့က အန္တရာယ်များပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် တရားဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတတ်ပါတယ်။ တဏှာရူးကတော့ ဝေးဝေးကရှောင်တာကောင်းပါတယ်။
သေချာတာကတော့ ဏှာဘူးဖြစ်ဖြစ်၊ တဏှာရူးဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဘူးတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သို့သော်လည်း မဘူးရ မနေနိုင်လို့ ဘူးကြပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် စဉ်းစားလို့ရသမျှ ဏှာဘူးကောင်းကျင့်ဝတ်များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (လိုတာရှိရင် ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါ)
၁- ဏှာဘူးထမယ်ဆိုရင် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပါ။
၂- ဏှာဘူးထမယ်ဆိုရင်တောင် မနောကံနှင့် အလွန်ဆုံး ဝစီကံလောက်အထိသာ ဘူးပါ။
၃- သူတစ်ပါး ဣနြေ္ဒပျက်ပြားအောင် မဘူးရပါ။
၄- ဘေးမှာ ပိုင်ရှင်ပါနေရင် မဘူးရပါ။
၅- အကြည့်၊ အပြော မရိုင်းရပါ။
၆- မသိမသာနှင့် မည်သူမျှ မရိပ်မိအောင်သာ ဘူးပါ။
၇- လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်အောင် မဘူးရပါ။
၈- ဏှာဘူးထဖို့ အချိန်နှင့် ငွေကို မဖြုန်းရပါ။
၉- ကာယကံမြောက် ဏှာဘူးထခြင်းကို မိမိ၏ ကာမပိုင်နှင့်သာ ကျင့်သုံးပါ။
အားလုံး အားလုံးသော မတစ်ထောင်သားများ ဏှာဘူးကောင်းများ ဖြစ်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် (ကျွန်တော် အပါအဝင် ?)။
Wai Phyo Maung (ဏှာဘူးသုတေသီတစ်ဦး ?)
(ဖဘက မ လာတာပါ သဂျီးရယ်…။ မနောကံလောက်ဆို မဆိုးပါဘူးရယ်…)
အမေရိကားမှာကျ.. ကာယကံနဲ့.. ၀စီကံဆိုရင်.. တရားလိုလုပ်တိုင်ရင်.. ထောင်ကျကိန်းရှိပါတယ်..။
မနောကံကတော့.. မြန်မာမှာသာ ကာမေသုမိစ္ဆာဘာညာဆိုပြီး.. ရောချလိမ်နေကြတာ..
လူသားရယ်လို့ဖြစ်လာရင်.. ကျားနဲ့မ.. မနောကံနဲ့ စိတ်ကူးတာ.. ရှိကိုရှိမှ.. ရှိလည်းရှိပါ့..။
သဘာဝတရားကို.. ဆန့်ကျင်တာက.. လက်တွေ့ကျ.. မဖြစ်နိုင်…
အဲဒါကို ခပ်တည်တည်နဲ့.. ဘာသာရေးအရ၀င်ပိတ်ရင်.. ဖုံးမနိုင်ဖိမရနဲ့.. ဟိုမှာဖက်.. ကာယကံနဲ့.. ၀စီကံ မှာလွန်ကုန်ရော…
ဒါကိုလည်း.. မြန်မာပြည်မယ်.. မုဒိန်းမှုတွေအရမ်းများတာက”ပြ”တယ်..။
တဂှီးရေ ပြောရမယ်ဆို 18+တွေကြည့်နေတာလည်း မနောကံပဲမဟုတ်ပါလား။ကာမေသုမိဆ္ဆာအတွါက် ငရဲမှာ နေရာအတော်လိုမယ်။သူကြီးပြောသလိုဖြေတွေးတော့လည်း ငရဲကိုကြိုမကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့။
နောက်များဆိုရင် ဥာဏ်သုံးမှ ရတော့မယ်…။ လောလောဆယ်.. Volkswagen နဲ့ Ducadi အသစ်ဖွင့်ဖို့ ရှိနေတာ..
Position တစ်ခုကို တစ်ပိုစ့်နှုန်းနဲ့ JDs/JS လေး Announcement က ပြန်ကူးပြီး သဂျီးပိုက်ပိုက်ကို ထိုင်ရာမထ သဲ့ယူတာဗဲ ကောင်းမယ်…။
ကကပရေ…မြင့်မြတ်တဲ့ယောကျာ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နိမ့်ကျတဲ့ယောကျာ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်ဘူးကြတာပါတယ်။မိန်းမတွေလည်း ဘူးတယ်ဆိုပေမယ့် မိန်းမတွေက ရုပ်ကြည့်ရုံဘူးတာ။ယွကျားတွေကကျ အပေါ်အောက်ကြည့်ဘူးတာ။အိနြေ္ဒနဲ့ဘူးတာနဲ့ ပြောင်ဘူးတာပဲကွာတယ်လို့ပြောကြမယ့်။
ဒါမယ့်အဲ့လိုကြီးအကုန်တော့မမှန် တစ်ချို့ယောက်ကျားတွေက ဘူးရမယ့်အချိန် ဘူးရမယ့်လူ (တရားဝင်ဘူးခွင့်ရှိတဲ့ ပွန်းမင်းသမီးလိုမျိုး)အစရှိတာတွေကို ကာလံဒေသံနဲ့ စိတ်ပြေရုံဘူးတာ။တစ်ချိုပက ပါးစပ်ကမချတမ်း၊မျက်စိကမခွာတမ်းဘူးတာ။ရည်းစားရတာနဲ့ အဲ့ကိစ္စအပြတ်ဖြတ်နိုမှ ဆရာကျတယ်ထင်တဲ့လူကလည်းရှိသေး။အစ်မ ကပတက စာရိုက်ချိန် ဇော်၈ျီအမှန်မပေါ်လို့ စာတွေမှားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
ဆုလဲ စာတွေ အမှန်မပေါ်ဘူး မွသော်ရယ်…
Word File တစ်ခုဖွင့်ပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်..၊ ဟိုဘက်ပြန်ကော်ပီကူးပလိုက်တယ်..
အိနြေနဲ့ ဘူးတာကတော့ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်..အမရယ်…။ တချို့ကျ ကိုယ့်ရှေ့တင် လျှောက်သွားတဲ့မိန်းကလေးတွေကို အပေါ်အောက်ကြည့်ကျ၊ မျက်နှာပြီတီတီနဲ့ အချင်းချင်းပြောကြ၊ မိန်းခလေးအနေခက်သွားမလား သူတို့ သိက္ခာကျသွားမလားလဲ မစဉ်းစား၊ ငါယောကျာင်္းလေးပဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရတယ်..တစ်ဖက်မိန်းခလေး ဘယ်လိုနေနေဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မကြိုက်တာ…
အဲ့တာမျိုး victim blaming တွေ က male-dominated society တွေမှာပဲ တွေ့ရတတ်တာ၊​ အိန္ဒိယ၊​မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊​အရှေ့အလယ်ပိုင်းပေါ့ စသည်ဖြင့်၊​
ငယ်ထဲက mindset က ကွဲပြားတာက ဘာသာရေးအရလဲပါလိမ့်မယ်၊ သိသလောက် ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ အစလမ်နဲ့ ဟိန္ဒီ မှာက အမျိုးသားဦးစားပေးဝါဒကို၊
Brad Pitt ရဲ့ World War Z ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကကြည့်လိုက်တော့၊​ ကမ္ဘာပျက်ကပ်လိုမျိုး ရောဂါပိုးကူး ဆက်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ Brad Pitt က အကြောင်းရင်းရှာဖို့ စစ်ဆင်ရေးထွက်ရမယ်ဆိုတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းမနဲ့ သမီးလေးရယ်၊ သူတို့ကယ်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်သားလောက် ချာတိတ်လေးရယ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး၊​ ၄ နှစ်သား ကောင်လေးကို မှာတာက ငါသွားတော့မယ် မင်းမိန်းခလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ပါ စိတ်ချပါရစေ မှာတော့၊ ၄ နှစ်သားကောင်လေးက ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ အိုကေ ဆိုပြီးခေါင်းငြိမ့်တယ်။
ဆိုတော့… ယဉ်ကျေးမှုပြောရမလား ဘာသာပဲပြောရမလား၊ သူတို့ငယ်ငယ်လေးထဲက mindset ထဲမှာကိုက အမျိုးသမီးတွေဆို စောင့်ရှောက်ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာ ရှိနေတာ….
ဆိုတော့ အဲ့နိုင်ငံမှာကော မုဒိန်းမှု အမျိုးသမီး Harassment တွေ ရှိမနေဘူးလားလို့တော့ ကပ်ဖဲ့ပြီးလာမမေးနဲ့…. နေရာတိုင်းမှာ လူကောင်းလူဆိုးဆိုတာရှိတာပဲ…. ဒါပေမဲ့ generally mindset ကိုပြောပြတာ။​
ဆုကြည့်ရတဲ့ တချို့ဇာတ်ကားတွေမှာလဲ ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကလေးတွေကိုဆို.. တခြားလူကြီးတွေက အမေ့ကို စောင့်ရှောက်နော်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးသုံးကြတယ်..
ကလေးတွေကလဲ ငါတို့ လူကြီးဖြစ်နေပြီ၊ အမေ့ကို စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မျိုး ရသွားကြတယ်…။ ကျောင်းဘက်ကလဲ သူတို့ဟာသူတို့ ရပ်တည်တတ်အောင်၊ ပျော်ပွဲစားထွက်တာမျိုးလို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်အောင် သင်ပေးတာ..
ဒီနိုင်ငံမှာကျ… သားအမိအပြင်ထွက်ရင်တောင် ၁၆နှစ်လောက်မျိုးတောင် အမေကို မှာတာက ကလေးကို ဂရုစိုက်နော်ဆိုတာမျိုး…
၅နှစ်နဲ့ အထက်တွေအကုန် ဖြုတ်ထုတ်သတ်ရမလိုပဲ… (ရွာကလူတွေ မပါ.. )
ဆု ဖဘ အကောင့် ဒီထားတာလား မတွေ့လို့ အရင်ကဆို ပုံလေးတွေတွေ့တယ်လေ..။
ဟုတယ် အဲ့ လူနှာဗူးတွေ တဏှာရူုးတွေ မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းမိတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့နေရာနဲ့ သူအဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးအ၀တ်အစားဝတ်ပြီး
လန်းနေရင် ငန်းနေကြမှာသိလို့ ဂွမ်းဂွမ်းပဲနေတယ်..။
ဟုတ်တယ် မြတ်ပုလဲရေ့… ။ ခဏ ဒီ ထားတာ…
တချို့ ယောကျာင်္းလေးတွေရဲ့ မဟာဖိုဝါဒ နဲ့ အနိုင်ကျင့်ချင်စိတ်ကို သဘောမကျတာ…။ ရန်ပြန်တွေ့ ရန်ပြန်လုပ်လဲ သူတို့ဘယ်လိုများအရှက်ခွဲ ရန်လုပ်မလဲနဲ့ ခံရတဲ့သူက ပြန်ကြောက်နေရတယ်..
ဟိုးအရင်ကလူတွေဆိုတာ.. လူတွေသာ ဆိုးချင်ဆိုးတာ…၊ ရှက်တတ်ကြသေးတယ်….
ခုခေတ်လူတွေက သူတို့လုပ်နေတာကိုက နိုင်ထက်စီးနင်းဖြစ်သွားလား၊ သူတို့ကပိုရှက်ဖို့ကောင်းလားတောင် မသိကြတော့ဘူး…
ခေါင်းမြီးခြုံတာက မြန်မာအခေါ် ဘူခါ ။ အဂ်လိပ်လို burquoir ။ ရွာထဲ ပြန်ဝင်လာပြီလား။ ရွာစည်တော့မှာပဲ ကောင်းကင်ပြာလေးရေ။
သဂျီးနဲ့ ရွာကို စိတ်မချလို့..
Water Sensor အကြောင်းရေးချင်သေးတာ…။ ကိုယ်တိုင်က အဲ့ဘက် ပရိုမဟုတ်လို့ အချက်အလက်စုပြီး လမိုင်းလဲ မကပ်နေသေးဘူး…။
ခုနောက်ပိုင်း ကုလမတွေမြင်မြင်လို့ သူတို့ခြုံထားတာတွေ တွေ့တွေ့နေရရင် အမကိုပဲ ပြေးပြေးမြင်နေတယ်… ဟီးးး
အဲ့စာအုပ်တစ်ကယ် မှတ်မှတ်ရရ…။ တရေးနိုးတောင် ထ ဖတ်ခဲ့ရတာ…။
ကင်းကောင်ကို ပျားရည်ဆမ်း အရှင်မျို ချင်မိတာ ၂ဗူးထင်ရင် ဆည်ဂါမျို ခြင်တယ်။
Win Lwin Lay says:
သံလိုက်တို့သဘာဝ မျိုးမတူရင် ဆွဲငင်ကြတယ်ဟုတော့ စာသင်ဖူးတာဘဲဗျ။
သံလိုက်တို့ သဘောကို သိပါရဲ့…။ ဒါက အပြစ်မှ မဟုတ်ပဲ.. သဂျီးပြောသလို သဘာဝလေ…။
ဒါပေမယ့်.. မိန်းမတွေရဲ့ အနောက်အလည်ပိုင်းနေရာကိုမှ ပြီတီတီ မျက်နှာထားနဲ့ကြည့်တာတို့….၊ ပါးစပ်က သားပြောမယားပြော ပြောတာတို့…၊ ရှေ့တင်ရော နောက်ကွယ်မှာပါ…ပါးစပ်အရသာခံပြောတာတို့… ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာလို အခွင့်သာရင်သာသလို ကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးကျတော့ သဘာဝတရားထက်လွန်ပြီး နှာဗူးကျတာ တဏှာရူးတာ နှမချင်းမစာနာတာ ဖြစ်သွားပြီ…